Adobe wuxuu cusbooneysiiyaa Creative Cloud oo ah fiidiyow, sawir, sawir iyo sawir | Abuurista khadka tooska ah
Dhowr saacadood ka hor Adobe ayaa ku dhawaaqday tiro cusub oo casriyeyn cusub ah qaar ka mid ah barnaamijyadaada ugu fiican ee Abuurista Cloud Cloud. Waxaan ka hadleynaa 'Premiere Pro', Ka dib Raadka, Fresco, Photoshop-ka iPad-ka, iyo inbadan.
Iskusoo wada duuboo waxay u yimaadaan qalabyada la xiriira leh fiidiyow, sawir, sawir iyo sawir qaadis. Maalin fikrad loogu talagalay Adobe iyo kuwa u adeegsada aaladooda ujeedo xirfadeed iyo waxbarasho. U tag.
Marka hore waxaan leenahay Adobe Fresco oo lagu cusbooneysiiyay dhibco isha midabyo badan leh, qalabka loo adeegsado goynta vektorada, nooc cusub oo gaar ah oo burush ah oo la jaan qaada kuwa Photoshop Mixer, hagaajinta qalabka xukuma iyo Isdhexgalka Adobe Capture oo leh Qaabab. Runtu waxay tahay inaysan ku soo gaabin barnaamijkan.
Haddii aan u tagno Photoshop-ka iPad-ka, waxaa jira laba horumar oo muhiim ah: Qalooca iyo xasaasiyadda cadaadiska ee qalinka Apple. Wareegyadu waa muuqaal muhiim ah oo Photoshop ah oo kombuyuutarka ah iyo in hadda kuwa iPad haysta ay gacantooda ku jiri doonaan. Waxaan haysan doonaa dhammaan kuwa midabada iyo qiimaha codka si aan u hagaajino oo aan dib ugu hagaajino sawirradeena. Marka laga hadlayo xasaasiga, hadda waad hagaajin kartaa cadaadiska xasaasiga ah si aad si fiican ugu nadiifiso markaad sawireyso.
Ugu dambeyntii, oo ku saabsan fiidiyowga dijitaalka ah iyo codka, waxaan leenahay ProRes RAW ee Premiere Pro iyo Saameynta Kadib, shaqooyinka sawirada ee sifiican loo socodsiiyay ee Premiere Pro, si iskumid ah loogu celceliyo iyo faallooyinka qaabdhismeedka qaabdhismeedka Kadib Saamaynta, kobcinta Audio Triggers iyo shaandhaynta waqtiga ee Character Animator, taageerida feylasha maqalka ee maktabadaha Creative Cloud, awood u lahaanshaha si otomaatig ah mashaariicda 4: 5 saamiga iyo beddelidda kamaradda gadaal ee Premiere Rush.
Waan awoodnay faahfaahin dheeri ah ka sii qaado cusbooneysiinta Premiere, laakiin ugu dambayntii waxaa looga dan leeyahay wax-ku-oolnimada marka wax lagu soo saarayo barnaamijkan. Way cadahay in Adobe uu sii wado inuu si adag u shaqeeyo si uu u sawiro waxa noqon doona tobanka sano ee cusub ee abuurista hal abuurka iyada oo loo marayo dhammaan noocyada qalabka; runti xitaa maalmahan xabsi waxaan leenahay dhimbiil adobe lacag la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe wuxuu si weyn u cusbooneysiiyaa barnaamijyadan loo yaqaan 'Creative Cloud' barnaamijyadan: Premiere Pro, After Effects, Fresco, iyo inbadan
Wareegyada cadayga iyo dareenka waxay ku yimaadaan Adobe Photoshop on iPad